Samsung Galaxy A51 sy Galaxy A71 dia manambara ny vidiny sy ny fahatongavany any Eropa | Androidsis
Samsung Galaxy A51 sy Galaxy A71 dia manambara ny vidiny sy ny fahatongavany any Eropa
Niandry ny fampandrenesana finday roa izay fantatray fa tonga tany Vietnam tamin'ny voalohany. Samsung ihany izao no manapa-kevitra ny hanao Fanombohana ofisialy ny telefaona Samsung Galaxy A51 sy Galaxy A71 any Eropa, miaraka amin'ny mari-pamantarana ny vidiny any amin'ny firenena samihafa.
Vidin'ny telefaona roa
Ny voalohany amin'izy ireo, ny Galaxy A51 dia ho hita amin'ny mpivarotra sy mpitatitra any Netherlands amin'ny faran'ny volana janoary. Ny vidin'ity maodely ity dia 370 euro, azo vidiana hatramin'ny alokaloka telo isan-karazany, ao anatin'izany ny fiandohan'ny Crush Black, manga sy fotsy malaza.
Frantsa dia firenena iray hafa izay handray azy amin'ny faran'ny volana, Samsung dia tsy nilaza raha anisan'ireo firenena ireo i Espana, na dia handeha hatrany amin'ny faritany eropeana aza ny fipetrahana. Naleon'ny orinasa niresaka momba ilay Samsung Galaxy S10 Lite vaovao sy Samsung Galaxy Note 10 Lite.
Samsung Galaxy A71 nampiakatra ny vidiny 100 euro Raha ampitahaina amin'ny kinova A51 dia avo kokoa ny specs raha ampitahaina. Galaxy A71 dia mitentina 470 euro, hita amin'ny loko Crush Black, manga sy volafotsy izy io. Manomboka amidy amin'ny 7 febroary any Angletera ary manomboka amin'io volana io any amin'ny firenen-kafa.
Ny vidin'ireto firenena ireto dia mety miovaova kely, saingy tsy lavitra ny maha manaraka azy ireo azon'ny orinasa Koreana Tatsimo amin'izao fotoana izao. Ny tsipika Galaxy A dia fahombiazana Ary fantatr'i Samsung fa io laza io dia tokony hanararaotra azy amin'ny taona 2020.
Ny maodely Samsung Galaxy A50 sy Galaxy A70 dia nivoaka tamin'ny volana martsa sy aprily tamin'ny taon-dasa, miaraka amin'ny vidiny 350 mitovy amin'ny voalohany sy faharoa 420 euro. Ny fivarotana an'ireny smartphone ireny dia be dia be manerantany ary ny fandefasana fanavaozana dia zava-dehibe amin'ny orinasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung Galaxy A51 sy Galaxy A71 dia manambara ny vidiny sy ny fahatongavany any Eropa
Xiaomi Mi 9T sy Redmi K20 vondrona iraisam-pirenena dia mahazo Android 10 marin-toerana eo ambanin'ny MIUI 11